Njengoko kwimbewu yelotus ikamva elizayo, ngoko ke kwimo yomntu luhlobo olugqibeleleyo lwabantu luyafihlwa. Oluhlobo kufuneka lukhulelwe ngokungacwangciswanga, emva koko ngokuzalwa komzimba wayo wentombi. Wonke umntu ozelwe ngolo hlobo uba nguMsindisi wehlabathi osindisa ekungazini nasekufeni.
Kwathiwa kwakudala: igama elahlekileyo: liye laba yinyama. Ngokuphakanyiswa koMsindisi igama elilahlekileyo liya kufunyanwa.
Vol. 1 SEPTEMBA, 1905. 12
Umcimbi obalulekileyo awunakuba uphucukile ngemeko yokulungelelanisa indawo elungeleleneyo kumhlaba ongenamgaqo uyilo okanye iFomu.
Ngaphandle komgaqo wefom elula yinto ayinakuba idityanisiwe kwaye yaphuhliswa yaba yikhonkrithi. Ngaphandle komgaqo wokubumba izinto zomhlaba, zezityalo, kunye nezilwanyana, ngekhe ziqhubeke ngoluhlobo. Ngaphandle komgaqo wokubumba izinto zomhlaba, zezityalo, kunye nezilwanyana, ziya kwahlulahlula kwaye zibuyele kuloo meko iphakamileyo apho zivela khona. Ngokwendlela izinto zilungelelaniswe ukuze zisebenzise, ​​kwaye iqhubela phambili isuka ebukumkanini ukuya kobukumkani ngohlobo. Onke amandla ayinto yonke, kwaye wonke umcimbi unyanzelekile, unyanzeliso kwaye into ingabezichasi zento enye kuyo nayiphi na iplanethi yokusebenza. Umoya kwiinqwelomoya eziphakamileyo uba yinto kwindiza yethu, kwaye umba wenqwelomoya wethu uya kuba ngumoya kwakhona. Ukusuka kumbandela wokuqala olula, kwihlabathi lethu nangaphaya, kubuchule bokomoya, yonke into idityaniswa ngezinto kunye nomoya, -kanye “amandla” njengoko abanye bekhetha ukubiza umoya-kodwa kukho iindlela ezisixhenxe zokwenza kwabo. Siphila ngokwasemzimbeni, eyona iphantsi kwindawo yokwenyama, kodwa hayi kwinqanaba lokuphuhliswa.
Ifomu ngumgaqo obalulekileyo kuwo nawuphi na umdiza wentshukumo kwaye, njengomgaqo, usebenza kwifomati nganye kwezisixhenxe. Kukho iifom zokuphefumla, ezisetyenziswa yingqondo ukwenza ukungena kwayo kokuqala ebomini; Iimpawu zobomi, ezisetyenziswa lulwandlekazi olukhulu lobomi ukuhambisa amandla alo ngokusebenzisa imihlaba eboniswayo; Iifom ze-astral, ezisetyenziswa njengendawo ekugxilwe kuyo okanye umhlaba wokuhlangana kuyo yonke imikhosi kunye neefomathi, njengevili lombumbi, ingqondo isebenza; Iifom zokwabelana ngesondo ngokwasemzimbeni, ezisetyenziswa njengolungelelaniso okanye ivili lokulinganisa apho ingqondo ifunda imfihlakalo yolwazelelo, ukungazingci, kunye nomanyano; iifom zeminqweno, ezibonisa ukuchaza, ukubona, kunye nokubeka ngokweminqweno ngokophuhliso lwendalo kwilizwe lezilwanyana; Iifom zokucinga, -ezenziwe ngumntu ocacisayo, abapeyinti, kunye nabanye oothunywashe-ezibonisa umlinganiso wengqondo, zibonisa iinjongo zobuntu, kwaye zisebenza njengendawo eseleyo okanye imbewu ngokwendlela yokwakheka kobuntu obutsha; uhlobo-lomntu, olu luphawu okanye i-ego eqhubekayo ukusuka ebomini ukuya ebomini, iqhuba inani elipheleleyo lokuphuhliswa. Xa ifom yomntu ngamnye igqibile ukujikeleza umjikelo wayo wokungaphili ngendlela yobudala kwaye ayifuni kuphuma. Ngaphambi kokuba igqityiwe, nangona kunjalo, indlela yayo inokutshintsha. Kukho iindlela ezifanelekileyo ezingaphaya kwesikali esikhuphukayo, nangona ngoku zingenakuba yingeniso yokuqikelela ngazo.
Umzimba wenyama ubonakala usisigxina, kodwa ke siyazi ukuba izinto ezenziwe ngayo zihlala zilahliwe, kwaye ezinye izinto kufuneka zisetyenziselwe ukuthatha indawo yenkunkuma. Ulusu, inyama, igazi, amanqatha, amathambo, umongo, kunye nemithambo-luvo, kufuneka itshintshwe njengenye indawo esetyenzisiweyo, kungenjalo umzimba uyonakaliswa. Ukutya okusetyenziselwa le njongo kwenziwa malunga nento esiyityayo, esiyiselayo, esiphefumlayo, yokuvumba, yokuva, yokubona, yokucinga. Xa ukutya kuthatyathwa emzimbeni kudlulela kumjelo wegazi, obu bomi bomzimba bokwenyama. Yonke loo nto inokuthathwa ngumjelo wobomi kwaye ifakwe ngegazi kwizicubu, okanye naphina apho kufuneka khona. Omnye ummangaliso omkhulu kwiinkqubo eziqhelekileyo zomzimba kukuba, emva kokuthatyathwa kwezinto zokutya, amasuntswana ayakhelwe kwiiseli ezithi, xa zizonke, zilungelelaniswe ngohlobo lwamalungu kunye nezicubu zomzimba. Kwenzeka njani ukuba umzimba ophilayo kunye okhulayo uhlale uhleli ungaguquki kuhlobo lwalo lonke ixesha lokuphila, ngaphandle kokuba umbandela osetyenzisiweyo ekwakhiweni kwawo ubunjiwe kwaye ugcinwe ngokwendlela eqinisekileyo ngayo.
Njengoko umsinga wegazi emzimbeni wethu ugcina yonke into yawo ujikelezwa, ke ngoko kuhamba umjikelo wobomi ngomzimba wendalo ogcina umbandela wawo ujikelezwa rhoqo. Iyakunciphisa ukubonakala kokungabonakaliyo kwaye inyibilikise kwakhona okungabonakaliyo ekubonakaleni ukuba ngalinye lamalungu alo anokusebenza ngokubhekisele phambili kwimfezeko.
Sibona iifom ezingenakubalwa ezisijikelezileyo, kodwa kunqabile ukuba sibuze ukuba ngaba izinto ezibonakalayo zithatha njani iifom kwindlela esizibona ngayo; Ngaba uhlobo kunye nomcimbi omkhulu uyafana; yeyiphi ifom okanye kutheni ifomu elinikiweyo kufuneka iqhubeke kudidi olunye?
Izinto ezingafunekiyo azinakuba zezakumba, kungenjalo ngekhe zitshintshe ngokukhawuleza; okanye ukuba iyatshintsha iyakutshintsha ibe lolona hlobo oluthile. Ifomu ayinakuba yinto enkulu okanye iya kutshintsha njengombandela, lo gama sibona ukuba umzimba ngamnye ugcina ubume bayo, ngaphandle kokutshintsha kwemicimbi ukugcina umzimba ukwimo. Sibona into enkulu, kwaye sibona uhlobo lwayo. Ukuba sibona imeko enkulu, kwaye siyayibona ikwimo, kwaye imeko enkulu ayisiyo ifom, kwaye ayisiyiyo ifomathi yomtshato, ngoko asiyiboni le fomu ngaphandle komcimbi. Ifom, ke, nangona ingabonakali ngokwayo, iza ukubonakala ngokuncedwa kuphela, kodwa, kwangaxeshanye, yenza ukuba umcimbi ubonakale, kwaye ngokubonakala, ukubonisa ukukhula kwayo kwizikumkani ezisezantsi; ukusebenza njengemoto yemfundo yengqondo; kwaye ngokusebenza ukunceda inkqubela yayo ngokunxibelelana nengqondo.
Iifom zendalo esizibonayo zezona iikopi ziyinyani okanye zingaphantsi kweyona nyani yokuboniswa kwe-astral yeefom ezifanelekileyo Ubomi bakheka ngokokwakhiwa kwefomathi ye-astral kwaye ekuhambeni kwexesha ifom ibonakala kwilizwe lethu.
Iifom zeengcinga ezifihlakeleyo. Isikristali, ixhwili, okanye umhlaba, ngamnye ubonakala ngokubonakala kwifom, nto leyo ecingwa njengengcinga. Iingcamango zobomi zihlala ziluhlobo oluhle emva kokuba umntu efile kwaye zibonelela ngembewu apho, xa ixesha elifanelekileyo lifika, lubunjwe ubuntu obutsha.
Izinto, umzobo, kunye nombala zizinto ezintathu eziphambili ekufuneka zenziwe. Umgangatho ngumzimba wefom, ukubala umda kunye nomda, kunye nombala wokuma kwawo. Ngaphantsi kweemeko ezifanelekileyo iifom zinxibelelanisa ukuhamba kobomi, kwaye ngokuthe ngcembe ubomi buyakha bube bobonakalayo kwaye bubonakale.
Iifom azikho ngenjongo yokubambisa ingqondo kunye nokukhohlisa ingqondo, nangona iifom zibambisa kwaye zilahlekisa ingqondo. Ngokwenene yingqondo ngokwayo ezilahlekisayo kwaye ivumele ukuba ikhutshelwe kwifomu, kwaye ingqondo kufuneka iqhubeke ekukhohlisweni de ibe iya kubona iifom kunye nenjongo yeefom.
Injongo yefom kukusebenza njengentsimi, ilabhoratri, ukuba ulwazi lwangaphakathi luhlale lusebenze. Ukuxabisa ifom ngexabiso layo eliyinyani, kunye nenxalenye elithathayo ekuyileni komgaqo-siseko wobulumko esithetha ngawo njengombala. Ingqondo, kufuneka sazi ukuba zibini iindlela: iNdlela yeFom kunye neNdlela yokuGazi. Zizo kuphela iindlela. Mnye kuphela onokukhethwa. Akukho mntu unokuhamba zombini. Zonke kufuneka zikhethe ngexesha, akukho namnye onokwala. Ukhetho luyindalo kunye nokukhula. Kugqitywa ngesizathu sobomi bakhe. Indlela ekhethiweyo, umhambi unqula njengoko ehamba. Indlela yeefom iqhubela phambili kwaye inyukele phezulu, kumandla aphezulu nobuqaqawuli, kodwa isiphelo bubumnyama bentshabalalo, kuba zonke iifom zibuyele kwinto eyodwa. Ukusuka kumnqweno wokuqala wokuba nezinto okanye uhlobo oluthile, ukuya kumnqweno wokufumana izinto okanye ukufunxwa ngohlobo; ukusuka kumnqweno wokufumana izinto zekhonkrithi ngokwasemzimbeni, ukuya kuthixo olulungileyo kathixo; isiphelo sendlela yeefom siyafana sonke: ukutshabalalisa ubuntu. Ifom enkulu yencanca encinci, ibe yeefomathi ngokwasemzimbeni okanye ngokomoya, kwaye unqule ngokukhawuleza inkqubo. Iifom zekhonkrithi ezinqulwa ziingqondo zabantu zinika indawo yokunqulwa kweefom ezifanelekileyo. Oothixo abancinci bangeniswa ngoothixo abakhulu kwaye aba ngo-thixo omkhulu, kodwa uthixo nothixo wezithixo, xa sekusondele ezingcwele, mazisonjululwe ekubeni yinto eyodwa.
Umnqweno, amabhongo, kunye nobutyebi, zikhokelela kwihlabathi kunye nezinto ezisesikweni zomhlaba. Izinto ezisesikweni zehlabathi ziimpawu ezingathandekiyo zeefom zekhonkrithi. Izinto ezisesikweni zoluntu, zikarhulumente, zecawe, ziyinyani ngengqondo kwaye zineefom ezizezabo ngokuqinisekileyo njengoko iifom zakhona kwakhiwa amabhotwe, abathunywa, okanye abantu.
Kodwa iifom zekhonkrithi, kunye nezinto ezisesikweni zoluntu, urhulumente, kunye neenkolelo, ayizizo ububi ukuba zitshatyalaliswe. Ifom ixabisekile, kodwa kuphela ngokomgangatho oyincedayo ekuqondeni kokuqonda. Njengoko inceda inkqubela phambili yokwazi ukuba iluncedo kangakanani na.
Indlela yokuziva uqalisa ngokubakho kokuziva. Iyaqhubeka kwaye iyanwenwela koku kuqonda, nokusombulula zonke iifom kunye nengcinga ekwazini. Oku kukhokelela kubumbano, olunjengomba ophakathi kwezinto zehlabathi. Xa umntu enokuhlala eqinile, engoyiki, kwaye engenalo ixhala kwinqanaba le-yedwa-ness, nantsi le mfihlakalo: inqaku lokuphela kwe-ness liyanda kwaye libe yinto yonke-ye-Consessness.
Ukungena kumjikelo wobomi behlabathi, uzisongele ngokungxama kunye nomba omdaka, ungene ezihlangwini kwaye uthengiswa iziyobisi, ingqondo ijikelezwe, ibethelwe ngaphakathi, iboshwe phantsi kwaye ibambe ibanjwa ngohlobo. Izimo, iimvakalelo, kunye neefom, zingumxholo wengqondo-umyili wokwenene-kodwa bengakwazi ukuzilawula bazithobe, baphoxekile, kwaye bathanda inkosi yabo. Ngokweemvakalelo zikhule zibe zibonakala ziyinyani, ziye zenza malunga nengqondo engabonakaliyo yeemvakalelo ezinamandla kuneebhendi zentsimbi, kodwa zintle kakhulu ukuba zenziwe ngendlela yokuba zibonakale zifana nayo yonke into ethandekayo ebomini, ebomini uqobo .
Ifom ngoku nguThixo; ababingeleli bayo abaziintloko zizimvo kunye neemvakalelo; Ingqondo ingumxholo wabo, nangona isengumyili wayo. Ifomu nguThixo wezoshishino, owesizwe, kunye nowesizwe; zobugcisa, isayensi, uncwadi, kunye necawe.
Ngubani ke onokugatya kuThixo? Ngubani na owaziyo nowenza ukuthanda kwakhe, unako ukumbulala uthixo wobuxoki, aze asebenzise ukuvumisa; bakhululeni abathinjiweyo; libanga ilifa lakhe lobuThixo; kwaye uqale indlela ekhokelela ku-All-ness weSazi.